Izindatshana zikaDaniela McVicker ku Martech Zone |
Imibhalo nge UDaniela McVicker
UDaniela McVicker uyi-blogger futhi ungumbhali ozimele osebenza eduze namabhizinisi we-B2B ne-B2C ahlinzeka ngokubhala ngebhulogi, ukubhala ngamakhophi kanye nezinsizakalo zokubhala ghost. Njengamanje, ubamba iqhaza Ukubukwa okusha. Lapho uDaniela engabhali, uthanda ukuhamba, afunde izindaba zothando nezesayensi, futhi azame newayini elisha.
Iyiphi I-B2C CRM Engcono Kakhulu Yebhizinisi Lakho Elincane?
UMsombuluko, May 4, 2020 ULwesibili, May 5, 2020 UDaniela McVicker
Ubudlelwano bamakhasimende buhambe ibanga elide selokhu baqala. Ukucabanga kweBusiness2Consumer nakho sekushintshele esimweni sengqondo se-UX-centric esengeziwe esikhundleni sokulethwa ngokuphelele komkhiqizo wokugcina. Ukukhetha isoftware efanele yokuphathwa kobudlelwano bamakhasimende ebhizinisini lakho kungaba yinkohliso.